Ikhaya » LGBTQ » Abahambi be-LGBTQ +: Umnqweno ophezulu wokubuyela kuhambo ngaphambi kokuphela konyaka
Abahambi be-LGBTQ +: Umnqweno ophezulu wokubuyela kuhambo ngaphambi kokuphela konyaka
Uphando lwe-IGLTA lujolise kumathuba abantu be-LGBTQ + abakhetha imisebenzi eyahlukeneyo enxulumene nokuhamba kwiinyanga ezintandathu ezizayo, kwakhona bebonisa ukuzimisela okunamandla kokuhamba kunye neyantlukwano yentengiso ye-LGBTQ +.
I-73% yabaphenduli behlabathi bathi baceba ukuthatha iholide yabo elandelayo ngaphambi kokuphela kuka-2021
I-23% yabaphenduliyo yenze ubhukisho lokuhamba kwiveki ephelileyo
Iimpendulo zivela malunga ne-6,300 ye-LGBTQ + yabahambi kwihlabathi liphela
Umbutho we-LGBTQ wamanye amazwe + wokuHamba, ngenkxaso evela kwi IGLTA Foundation, kutshanje ikhuphe iziphumo zokuqala ezivela kwi-2021 ye-LGBTQ + ye-Post COVID-19 yoHlolo lwezohambo. Iimpendulo zivela malunga ne-6,300 ye-LGBTQ + yabahambi kwihlabathi liphela, kunye nabameli abakhulu abavela eUnited States, eBrazil, eMexico, eIndiya nakwi-EU.
Kunyaka omnye kubhubhane, umnqweno wokubuyela kukhenketho unamandla ngakumbi kunangaphambili. Phantse isithathu kwisine (73%) sabaphenduli behlabathi bathi baceba ukuthatha iholide yabo elandelayo ngaphambi kokuphela kuka-2021.
Phantse ikota enye (23%) yabaphenduliyo baye babekisa iindawo zokuhamba kwiveki ephelileyo, ngexesha lokuthatha uphando
“Xa besenza isifundo sethu sokuqala se-LGBTQ + ngeposi i-COVID-19 yokufunda iimvakalelo zokuhamba kulo nyaka uphelileyo, ubhubhane ubusemncinci kwaye yonke into ibingaqinisekanga. Okwangoku, iziphumo bezingenakuphikwa: Abahambi be-LGBTQ + babenexhala lokuba babuyele kuhambo ngokukhawuleza okukhulu, utshilo uJohn Tanzella, uMongameli / i-CEO ye-IGLTA. "Besifuna ukuphinda siyijonge le projekthi unyaka kweli xesha linzima ukuqinisa ukomelela kwabahambi be-LGBTQ +, kunye nokuxhasa ukubaluleka kokulingana, ukwahluka kunye nokubandakanywa kufikelelo kwindawo esiya kuyo."
Olu phando luye lwajolisa kumathuba e-LGBTQ + yabantu abakhetha imisebenzi eyahlukeneyo enxulumene nokuhamba kwiinyanga ezintandathu ezizayo, kwakhona bebonisa ukuzimisela okunamandla kokuhamba kunye neyantlukwano yentengiso ye-LGBTQ +.
Ama-58% anokwenzeka / kunokwenzeka ukuba ahlale ehotele okanye kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide
I-68% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ithathe uhambo lokuzonwabisa lwasekhaya
I-45% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ihlale kwikhaya leholide, i-condo okanye indlu eqeshisayo
I-31% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ithathe uhambo lokuzonwabisa lwamazwe aphesheya
I-19% inokwenzeka / inethuba lokundwendwela ipaki yolonwabo
I-25% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ithathe uhambo lweqela
I-13% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ithathe inqanawa
I-50% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ithathe uhambo olufutshane lokuhamba (iiyure ezi-3 okanye ngaphantsi)
I-36% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ithathe uhambo oluphakathi lokuhamba ngenqwelomoya (iiyure ezingama-3-6)
I-26% inokwenzeka / inokwenzeka kakhulu ukuba ithathe uhambo olude lokuhamba ngenqwelomoya (iiyure ezi-6 okanye nangaphezulu)
Iipesenti ezingama-43 zinokwenzeka / zinokwenzeka kakhulu ukuba ziye kwi-LGBTQ + yeNdibano yokuziqhenya
Uphando lwe-IGLTA lwe-COVID-19 LGBTQ + yoHlolo lwezohambo lwenziwa phakathi komhla wama-26 kweyoKwindla ne-9 kuTshazimpuzi ngo-2021 ngomnatha wonxibelelwano wequmrhu, kubandakanya amalungu kunye namaqabane eendaba. Iimpendulo zivela kubantu abayi-6,324 kwihlabathi liphela abangobani njenge-LGBTQ +. Kwagxininiswa ekufumaneni ubukhulu besini kolu phando.
I-57% yabaphenduli ichongwe njenge-gay; Iipesenti ezili-19 zesini Iipesenti ezili-17 zesini
I-70% yabaphenduli iphakathi kweminyaka engama-25 nama-64
I-63% yabaphenduli ngamadoda; I-31% ngabafazi, iipesenti ezi-1 zi-transgender, i-4% ichonga njengezinto ezingafaniyo okanye ezikhetha ukuzichaza